XARUNTA SIYAASADAHA SIFOOYINKA Shiinaha Miyaan ku dari karaa BATIIS? Warshadaha iyo Warshadaha | Lenda
Baaskiil Beach - e
Mini Wadada-e baaskiil
Isku laabista Baaskiil-e
Kuwa kale – e baaskiil
XARUNTA SIYAASADA EE XAALADA LAGU SAMEEYO. Miyaan ku dari karaa BATIIS?
Dhawaan, isticmaale gawaar koronto ayaa kiciyey su'aashan oo kale: Baaskiilada korantada ee aan soo iibsaday waa mid aad u gaabis ah. Miyaan ku dari karaa batteriga si aan uga dhaqso badan? Su'aashaas, jawaabta shirkadda Motorow-Tech ee adeegga tikniyoolajiyada iibka kadib waa inaysan suurta gal ahayn in lagu daro batariyo afar arimood oo waaweyn.
Marka hore, xadka cabbirka batariga, kuma dari karo baytariyada cusub
Qof walba wuu ogyahay in baytariyada si taxaddar leh loogu talagalay ka hor intaanay ka tagin warshadda, oo ay ku jiraan cabirka sanduuqa baytariga. Kaliya marka bateriga la sameeyo ma jiri doonno baxsad sabab u ah gariir. Qaadashada bushkuleetiga 48V korantada tusaale ahaan, wuxuu ka kooban yahay afar 12V baytariyada yaryar, iyo sanduuqa batariga wuxuu leeyahay oo wuxuu gali karaa oo keliya 4 baytar. Suurtagal ma aha in lagu daro baytariyada cusub.
Midda labaad, heerarka cusub ee gawaarida korantada waa la xadiday, iyo baaskiiladaha korontada leh ee ay ku jiraan baatarno cusub oo iskood loogu daray ma noqon karaan wadada.
Heerka cusub ee qaranka, baytariga baaskiillada korantada kama badnaan karaan 48V. Haddii isticmaaleyaashu rabaan inay ku daraan baytariyada cusub, waxay iska cad yihiin inaysan la kulmin heerarka cusub ee qaranka, gawaarida noocaas ah ee korantada ah waxaa loo kala saari doonaa gawaarida aan caadiga ahayn. Xitaa haddii isticmaalegu uu heysto laysan, baabuur koronto noocaas ah weli kuma raaxeysto jidka saxda ah, kaasoo ah wax ka beddel sharci darro ah. Malaha dad badani waxay rabaan inay dhahaan, ma u kala saari kartaa gaariga noocan ah sida mootada korantada? Jawaabtu waa maya. Sidaa daraadeed, laga bilaabo halkan, baaskiilada korantada laguma dallaci karo baytariyada.
Saddexaad, xaddiga guuldarrooyinka baaskiilada korantada ee aan lahayn baytariyad ayaa ka sarreysa
Fikrad ahaan, baaskiillada korantada ayaa si tartiib tartiib ah u fuusha, oo ku darista batteriga ayaa ka dhigi kara dhakhso. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego aragtida wax ku oolka ah, ku darista batteriga waxay u badan tahay inay gubto gawaarida ama koontaroolaha, taasoo ka dhigaysa heerka guuldarrooyinka baaskiilada korantada. Taas macnaheedu waa in haddii batari lagu dari lahaa, mootada iyo koontaroolaha waa in la beddelaa oo la iswaafajiyaa. Marka laga eego aragtidan, faa'iido darrooyinka ku darista batteriga ayaa ka badan faa'iidooyinka, kharashkuna aad ayuu u sarreeyaa, marka ma ku dari kartid batteriga.
Afaraad, baaskiilada korantada ku shaqeysa baytariyada ayagoo aan fasax haysan waxay leeyihiin halis weyn oo xagga amniga ah
Waxay inta badan ka muuqataa laba dhinac. Marka hore, baaskiil koronto leh oo wata baytariyada si gaar ah loogu daray waxay leeyihiin xasillooni xumo iyo qatar weyn. Marka labaad, baaskiil koronto leh oo ay ku jiraan baatariyado lagu daray kuma jiraan baaxadda seddexda dammaanadood ee soo-saaraha. Haddii ay jiraan dhibaatooyin la xiriira baabuurta korantada, waxaa kaliya lagu xallin karaa kharashkooda. Sidaa daraadeed, baaskiilada korantada ayaa si tartiib tartiib ah u fuusha, oo ku darista batari ma shaqeyn doono
Marka la soo koobo, Soosaarida alaabada farsamada sare ee deegaanka had iyo jeer waxay ahayd meelaha ugu waaweyn ee diiradda la saarayo shirkadda Motorow-Tech. Ku takhasusay qaabeynta, soosaarka iyo suuqgeynta mootada korontada, baaskiilka elektaroonigga ah, boodhadh iyo boodhadhka barafka lagu ciyaaro. Laga soo bilaabo afartaas qodob, baaskiilada korantada xitaa xawaaraha Xawaare, kuma dari karaan baytariyada. Xaqiiqdii, adeegsadayaashu uma baahna inay kordhiyaan xawaaraha iyagoo ku daraya baytariyada. Iyada oo ku saleysan xaaladda suuqa ee hadda, mootooyinka korantada iyo mootooyinka korantada ayaa loo isticmaali karaa wadada.
Waqtiga boostada: Apr-23-2020
XARUNTA SIYAASADA EE XAALADA LAGU SAMEEYO. MAAN SAMEEYA ...
AYAA KA SOO SAARAYA SHAQADA SAACADAHA SHAQADA
Aagga Dhaqaalaha ee Madaarka Tianjin
Naga Soo Wac Hadda: +8615222010177